Lauren RAJAOBELINA · Mey 2016 · Global Voices teny Malagasy
Lauren RAJAOBELINA · Mey, 2016
Febroary 2021 4 Lahatsoratra
Aogositra 2018 8 Lahatsoratra
Febroary 2016 5 Lahatsoratra
Aogositra 2015 15 Lahatsoratra
Septambra 2014 7 Lahatsoratra
Jona 2014 17 Lahatsoratra
Marsa 2014 13 Lahatsoratra
Febroary 2014 14 Lahatsoratra
Nanomboka nandika tamin'ny 07 Oktobra 2010 · 536 Lahatsoratra
Étudiante en gestion des ressources humaines.
Lahatsoratra farany an'i Lauren RAJAOBELINA tamin'ny Mey, 2016
Okraina : Ny Fomba Handaminana Ny Olan'ny Mpitsoa-Ponenana Mankany Eoropa
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Mey 2016
Raha toa ka ampiasain'ny manampahefana Okrainiana sy ireo mpikatroka amin'ny hery farany havanana mba hahazoana tombony ara-politika sy hanefena ny fijerin'ny olona ny olan'ny mpitsoa-ponenana, ireo mpitsoa-ponenana avy any Afovoany Atsinanana izy tenany kosa dia tsy nirohotra mba hiorim-ponenana any Okraina.
Tafintohina Tamin'ny Lalànan'ny Iraniana Momba Ny Sarondoha Ireo Ekipa Vehivavin'ny Air France
Iràna 19 Mey 2016
Mangataka ny zo tsy hiasa amin'ny zotra Paris-Tehran ireo vehivavin'ny Air France raha takiana ny fanaovana sarondoha, ary tohanan'ny vondrona Facebook "My stealthy Freedom" ( Ny fahafahako miserana) amin'ny fanentanana vaovao amin'ny aterineto ny hetsika ataon-dry zareo.
Rosia :Mifantoka Amin'ny Fanafihana Manaraka Atao Amin'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovan-Gazety
Eoropa Afovoany & Atsinanana 07 Mey 2016
Misy olona te-hampisaina mafy ny vahoaka any Rosia fa mivonona ny hivarotra ny anjara fananany anankiroa manan-danja indrindra : ny orinasa mpamokatra angovo Quadra sy ny vondrona mpitrandraka haino aman-jery RBC, ny mpanefoefo iray.
Amporisihan'ireo Manampahaizana Momba Ny Aterineto Rosiana Ny Politikan'ny “Tena Anarana Marina” Amin'ny Fanehoankevitra Amin'ireo Tranonkalam-Baovao
Eoropa Afovoany & Atsinanana 06 Mey 2016
Hetsika vaovao ataon'ireo manampahaizana momba ny aterineto mpiara-dia amin'ny Kremlin ny fikatsahana hanaovana ireo fanehoankevitra tsy misy anarana amin'ny haba-tranonkalan'ny haino aman-jery ety anaty aterineto ho tantara fahiny.
Martsa 2016, Manamarika Ny Fotoam-panovàna Sy Hatezerana Ho An'ny Fahitalavitra Japone
Azia Atsinanana 04 Mey 2016
Ampiasain'ireo Japone mpanao fandaharana efa hiala ireo fotoana sisa nahafahany niseho mba hanasongadinana ny jadona tsikelikely ataon'ny governemanta Japone amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety.
Ho Fiarovana, Ilain'ny Mpanao Gazety Shinoa Ny Lalàna Mifehy Ny Fanaovana Gazety
Azia Atsinanana 03 Mey 2016
"Rehefa tsy misy ny lalàna, raisintsika ny andraikitra sady afaka mifehy [ny haino aman-jery] araka izay itiavantsika azy isika."